चुडामणि उप्रेती गोरेको दुई लाख सांसद घनश्याम खतिवडालाई - Merodesh.news
चुडामणि उप्रेती गोरेको दुई लाख सांसद घनश्याम खतिवडालाई
विराटनगर, २१ असार । साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानको क्रममा खुलेको करिव ३८ क्वीन्टल सुन तस्करी प्रकरणका नाइके चुडामणि उप्रेती गोरेले सांसदलाई पनि चुनाव खर्च दिएको पाइएको छ ।
तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धनबाट मोरङ क्षेत्र नम्बर १ प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेद्वार घनश्याम खतिवडालाई दुई लाख चुनावमा सहयोग गरेका हुन् । चुनावका बेला उप्रेतीले खतिवडालाई रेवन्त आचार्य मार्फत २ लाख उपलब्ध गराएका हुन् ।
प्रहरी समक्षको बयानमा रेवत भनिने रेवन्त आचार्यले गोरेलाई आफूले सहयोग गर्न भनेपछि २ लाख ? पैया सहयोग गरेको बयान दिएका हुन् । गोरेलाई सनम शाक्यको हत्या अघि ब्याट्रि र बिद्युतिय कन्भटर किनिदिएका आचार्यले प्रहरीसगको बयानमा घनश्याम खतिवडाको चुनाव खर्चकालागि २ लाख ?पैया गोरेबाट आफूले लिएको बताएका हुन् ।
प्रहरीसगको बयानमा आचार्यले भनेका छन् । ‘ २०७४ सालको मंसिर महिनामा भएको संसदीय चुनावको समयमा गोरे भन्ने चुडामणि उप्रेती समेत उर्लाबारीमै आइ बसेको हुदा सो बेला गोरेले पहिलेको भन्दा धेरै फरक र आफ्नै गाडी समेत लिएर आएका थिए । मेरो दुबईमा होटलह? समेत छ भन्ने गरेका थिए तर के कस्तो काम गर्छन मलाई थाहा थिएन् र म पनि एमाले पार्टीमा आस्था राख्ने भएकाले सो बेला चुनावमा सहयोग गर्नकालागि मैले समेत निजलाई भनेपछि गोरे भन्ने चुडामणि उप्रेतीले २ लाख घनश्याम खतिवडालाई सहयोग गर्न भनि मलाई दिएका थिए । त्यसपछि उनी काठमाडौं गएका थिए भने म आफ्नो काममा व्यस्त थिए ।’